Maxa Ka Jira Inu Maraykanka Oo Kurdiyiinta Suuirya Hubaynaya? - Wargane News
Home Somali News Maxa Ka Jira Inu Maraykanka Oo Kurdiyiinta Suuirya Hubaynaya?
Residents look for survivors at a damaged site after what activists said was a barrel bomb dropped by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in the Al-Shaar neighbourhood of Aleppo, Syria September 17, 2015. REUTERS/Abdalrhman Ismail - RTX242XG
Wasaaradda gaashaan dhigga Maraykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in Madaxweyne Donald Trump ansixiyey qorshe hub lagu siinayo xoogaga Kurdiyiinta ee la dagaalamaya kooxda la baxday Dawladda Islaamka ee Suuriya.
Ciidamada Kurdiyiinta ah ee qaybta ka ah huwanta mucaaradka ah ee la yidhaa Xoogagga Dimuqraadiga ah ee Suuriya ee magacooda loo soo gaabiyo SDF, ayaa qalab la siin doonaa si ay kooxda Daacish uga saaraan magaalada ay ku xooganyihiin ee Raqqa, sidaana waxa sheegtay af-hayeen u hadashay Pentagon-ka.
Waxa aanay intaa ku dartay in Maraykanku “aad u ogsoonyahay” walaaca Turkigu arintan ka qabo.
Turkigu fallaagada Kurdiyiinta ah ee Suuriya ka dagaalamaya wuxu u arkaa in ay yihiin aragagixiso, waxaanu doonayaa in aan loo ogolaan in ay dhul ballaadhan oo Suuriya ah gacanta ku dhigaan.
Xoogaga SDF waxay isugu jiraan Kurdiyiin iyo maleeshiyaad Carab ah waxa aanay haatan ba taakulo ka helaan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka iyo kuwa diyaaradaha dagaalka ee xulufada Maraykanku hogaaminayo.
Waxa aanay haatan dagaal kula jiraan kooxda Dawladda Islaamka oo ay ku hirdamayaan gacan ku haynta magaalada Tabqa oo ah xarunta taliska ciidamada Daacish oo u jirta magaalada Raqqa 50 Km.
Xog ay BBC-du ka heshay Pentagon-ka ayaa sheegtay in qalabka la siinayo xoogaga Kurdiyiinta ay ka mid noqon doonaan rasaas, hubka fudud, boobayaal iyo qoryaha waaweyn iyo sidoo kale cagafcagaf yada dhismaha iyo baabuurta gaashaaman.
Xogta BBC-du heshay waxa ay intaa ku dartay in Maraykanku damacsanyahay in qalabkaa ay dib ula wareegaan marka magaalada laga saaro Daacish
Somaliland: Shirkadda Dahabshiil oo Deeq Gaadhsiisay Degmada Dharkayngeeyo